Newsenepal:: काठमाडौं आइपुग्यो विश्वकप क्रिकेटको ट्रफी
काठमाडौं आइपुग्यो विश्वकप क्रिकेटको ट्रफी
९ कात्तिक, काठमाडौं । विश्वकप क्रिकेटको ट्रफी नेपाल ल्याइएको छ । ट्रफीलाई शुक्रबार साँझ स्वयम्भूमा प्रदर्शन गरिएको छ । २०१९ मा इंग्ल्यान्ड र वेल्समा संयुक्त रुपमा आयोजना हुने एकदिवसीय विश्वकप क्रिकेटको ट्रफी ‘वल्र्ड टुर’ अन्तर्गत शुक्रबार काठमाडौं ल्याइएको हो ।
ट्रफी नेपालमा शुक्रबारदेखि सोमबारसम्म राखिनेछ । आईसीसीकी नेपाल प्रतिनिधि भावना घिमिरेका अनुसार ट्रफीलाई शनिबार विहान पोखरा लगिने छ । पोखरामा पोखरा पि्रमियर लिग (पीपीएल) चलिरहेको छ र भोलि त्यही ट्रफी प्रदर्शन गरिनेछ ।
ट्रफीलाई फेरि काठमाडौं ल्याइनेछ र आइतबार विहान चन्द्रागिरी र सोमबार बसन्तपुरमा प्रदर्शन गरिनेछ । देशको पहिचान र ऐतिहासिक स्थान भएको कारण ट्रफीलाई स्वयम्भु, चन्द्रागिरी र बसन्तपुरमा प्रदर्शनमा गर्न लागिएको हो
1991010/26/2018 @ 19:27
प्रहरीले शुरु गर्यो ‘समुदाय प्रहरी साझेदारी’ अभियान, घट्ला त समाजमा हुने अपराध ?
विश्वकप क्रिकेटको ट्रफी चन्द्रागिरी डाँडोमा
महंगिने भयो यसपालिको तिहार, सयपत्री र मखमलीको मालामा १५ प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि
निर्मला हत्याकाण्डमा एसपी र इन्सपेक्टरमाथिको कारवाहीले उब्जाएको प्रश्न ?
चाहे मन्त्री पद जाअाेस कर्मचारीको दादागिरी तोड्छु : लालबाबु पण्डित
ग्यास सिलिण्डर पड्केर मिठाइ पसलमा आगलागी
श्रम कार्यालयका २५ जना कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर